Shina ambongadiny 4P AC SPD 10KA spd T2 T3 Phase tselatra fisondrotry ny mpiaro HS2-40 mpanamboatra sy mpamatsy |HONI Electric
ambongadiny 4P AC SPD 10KA spd T2 T3 Phase tselatra firongatry ny mpiaro HS2-40
Rafitra fanaraha-maso maotera
Fitaovana famindrana herinaratra
Ivontoerana IT / Data
Toetra / tombony
Fametrahana mora na retrofift
Famolavolana tsy azo antoka / miaro tena
Tondro lavitra (tsy voatery) miaraka amin'ny fifandraisana 3 pin NO/NC
IP20 fifinger-azo antoka famolavolana
famantarana hita maso
HS25-C40 dia ny fitaovana isan-karazany amin'ny famoahana ny overvoltage transient induced (karazana 2 / Class II), mifanaraka amin'ny EN / IEC 61643-11.DIN rail plug-in endrika.
Fahaizana mamoaka ny fisondrotan'ny voltase (8/20 μs).
■Mety amin'ny dingana faharoa amin'ny fiarovana amin'ny tontonana fizarana famatsiana izay
Ny fitaovana fiarovana karazana 1 dia napetraka, na ho an'ny dingana voalohany amin'ny fiarovana amin'ny trano fonenana, ara-barotra na fampiharana hafa tsy tratran'ny fitokonana mivantana ary tsy misy rafitra fiarovana amin'ny tselatra ivelany.
■Ny fahafahan'ny famoahana miaraka amin'ny onjam-peo 8/20 μs.Imax: 40 kA.
■Fitaovana manokana ho an'ny rafitra TNS, TNC, TT, IT earthing.
■Fitaovana manokana izay mifanaraka amin'ny tambajotran'ny Power Line Communication.
■Biconnect - karazana terminal roa: ho an'ny tariby henjana na flexible ary ho an'ny busbar karazana fork.
■ Misy miaraka amin'ny famantarana lavitra azo atao.
Volavolan'ny mitohy faratampony (UC) (LN)
Volavolan'ny mitohy faratampony (UC) (N-PE)
SPD mankany EN 61643-11
SPD mankany IEC 61643-11
Anjaran'ny famoahana nominal (8/20μs) (In)
Famoahana farany ambony indrindra (8/20μs) (Imax)
Ambaratonga fiarovana amin'ny voly (Up) (LN)
Haavon'ny fiarovana ny voly (Ambony) (N-PE)
Fotoana famaliana (tA) (LN)
Fotoana mamaly (tA) (N-PE)
Famantarana ny toetry ny asa/fahadisoana
Maitso (tsara) / Fotsy na Mena (soloina)
Kilasy fitaovana insulating / flammability
Fizaran'ny Conductor (max)
35mm2 (Mafy) / 25mm2 (Malefaka)
Fifandraisana lavitra (RC)
mpitatitra azo atsofoka
Ho an'ny fametrahana
DIN lalamby 35mm
Ny fitaovana fiarovana amin'ny fisondrotana spd 4p HS-C40 dia mahafeno ny kilasy fepetra 2 araka ny IEC 61643-11.Ireo fitaovana ireo dia miaro ny rafitra mpanjifa ambany-voltage amin'ny overvoltages amin'ny karazana rehetra ary azo alaina amin'ny dikan-teny tokana amin'ny tsato-kazo efatra.Ny fampiasana varistora avo lenta dia manome fotoana haingana sy fiarovana ambany, tsy misy tsipika manaraka ny ankehitriny.Raha toa ka tsy azo antoka ny toe-javatra ary misy ny mety hisian'ny afo noho ny enta-mavesatra be loatra, ny sampana tapaka anatiny dia manapaka ny fisamborana amin'ny fantson-drano raha ilaina.
Ny fitaovana elektrika sy elektronika dia tena ilaina amin'ny asa andavanandron'ny orinasa sy ny olon-tsotra ankehitriny.Ny fitaovana toy izany dia mifandray amin'ny tambajotran-jiro, matetika mifanakalo angon-drakitra sy famantarana amin'ny alàlan'ny zotram-pifandraisana ary matetika saro-pady amin'ny korontana.Ireo tambajotram-pifandraisana ireo dia manome lalana fampielezam-peo ho an'ny overvoltages.
Ny fiarovana amin'ny tselatra sy ny overvoltage dia tsy miantoka fotsiny ny fiarovana ny olona, ​​​​ny entana ary ny fitaovana, fa miantoka ny fitohizan'ny serivisy fametrahana.Ny fiarovana overvoltage dia manitatra ny fiainan'ny fitaovana mihoatra ny 20%, izay mampihena be ny habetsaky ny fako elektronika.Mampihena ihany koa ny fanjifana herinaratra amin'ny fametrahana izany, izay midika ho fitsitsiana ny vidiny sy ny fiahiana ny tontolo iainana.
teo aloha: ambongadiny 3 dingana 10-20ka 385V SPD, overvoltage fiatoana fiarovana, tselatra fiarovana kilasy II + III spd HS2-20
Manaraka: HS2-I-25 mpisambotra tselatra ankehitriny
Andry 2 T1/T2 Spd
Fitaovana fiarovana (Spd)
HS2-I-50 mpisambotra tselatra ankehitriny
HS2X2, HS2X3 andiany Data sy Signal Surge Protec...
1P 2P 3P 4P AC240V 415V Modular Ac Contactor Ci...
HM232-125/HM234-125 Sisa amin'izao fotoana izao Circuit Br...